भारत–चीन द्रूत मार्गको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गुल्मी खण्डको काम पुरा – Chakra Jwala
Posted in Gulmi News
भारत–चीन द्रूत मार्गको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गुल्मी खण्डको काम पुरा
Posted on 18 Oct 2015 12 Feb 2017 by Chakra Bhandari
-विशाल भट्टराई गुल्मी
Picture: Kaligandaki Corridor Gulmi sector
राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम पूरा भएको छ। रिडी–रुद्रवेणी हुँदै खड्कोटको पालुङखोलामा पुगेर गुल्मी खण्डको ट्रयाक पूरा भएको हो।
४ जेठ, ०७० मा काम सुरु गरेको नेपाली सेनाले ४१ करोड ६४ लाख लागतमा गुल्मीको ४२ किलोमिटर बाटो पूरा गरेको हो। ‘गुल्मीको ४२ किलोमिटर बाटो खन्ने काम सकिएको छ,’ नेपाली सेना निर्माण कार्यदलका प्रमुख कर्नेल रेश्मीराज भट्टराईले भने, ‘बाग्लुङको मालढुंगादेखि टाकुरेसम्मको खण्डमा पनि काम भइरहेको छ।’ भट्टराईले गुल्मीको पालुङखोलादेखि बाग्लुङको टाकुरे सम्मको २२ किलोमिटर सडक निर्माणको पनि नीतिगत निर्णय भइसकेको तर बजेट निकासा हुन भने बाँकी रहेको बताए ।
‘उक्त २२ किमी सडककोलागि लगभग ३३ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त बजेट निकासा भएमा अबको एक वर्षमा भारत र चीन जोडिन्छ।’ उनले पुल र कल्र्भट बाहेक उक्त रकम लाग्ने बताए। ट्रयाक खोलिइसकेको भएपनि वर्षायाममा समेत बाटो संचालन गर्नको लागि अरु ४÷५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको भट्टराईले बताए । रिडी देखि पालुङखोला सम्मको खण्डमा ४१ करोड ५६ लाख खर्च भइसकेको छ भने मालढुंगा–टाकुरेमा १५ करोड बजेटमा काम भइरहेको छ। नेपाली सेनाले अहिले सम्म यस सडकमा ५६ करोड ६४ लाख खर्च भएको जनाएको हो ।
कालिगण्डकी करिडोरमा काट्नै नसक्ने पहाड तथा चट्टान भएपछि सरकारले उक्त काम सेनालाई लगाएको थियो। सेनाले ब्लाष्टिङसहित काम गरिरहेको छ। सेनाले गुल्मीको एकदमै अप्ठ्यारो भीर मानिने साँघुरेमा ५ करोड ८० लाख खर्च गरेर पहाड फुटाएको थियो। रुद्राबेणी पालुङखोला खण्डमा ३६ करोड भन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । सेनाले यो सडक अन्तर्गत बकेवा भीरका ६ खण्ड, बरगरे भीर, थपनी भीर, लत्रे भीर, बग्दीखोला भीर, मौरी भीर, मुल्का भीर, पुर्तिघाट भीर, घुमाउने भीर, बरल्वाभीर लगायतका ठाउँमा कडा मेहनत परेको जनाएको छ । खड्कोटको पालुङखोलामा पहिलो पटक बस पु¥याएर क्षेत्र नम्बर १ का सभासद कृष्ण छन्तेलले खर्वेनी–पलुङखोला खण्डको उद्घाटन गरेका हुन् ।
गैंडाकोट नबलपरासीबाट पाल्पा, गुल्मी, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ हुँदै कूल ३ सय ६९ किलोमिटरको लम्बाईमा यो सडकले भारत र चीनलाई जोड्ने छ। उक्त करिडोर जोडिएसँगै कालीगण्डकीको धार्मिक महिमाको प्रचार प्रसारमा टेवा पुग्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। गुल्मीमा करिडोरले ४२ किलोमिटर ओगट्ने छ भने यो नै भारत र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो र सजिलो बाटो हुने कालीगण्डकी करिडोर केन्द्रीय सरोकार समितिका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले बताए । पालुङखोला देखि बाग्लुङको टाकुरे सम्मको २२ किमी सडक बाहेक करिडोरको सबै क्षेत्रमा ट्रयाक खुलिसकेको छ ।
Previous Post पायल्स रोगबाट कसरी बच्ने? (जानी राखौं घरेलु उपाय।)
Next Post मिर्गौलाको पत्थरी कसरी हुन्छ? यसबाट बच्ने उपाय जान्नुहोस् !!